Somaliland: “Markaan Somalilander Noqon Waayo Anigoo Intaas Oo Xil Qaranka U Soo Qabtay Waa Kuma Ninka Ahi…?” - Wargane News
Home Somali News Somaliland: “Markaan Somalilander Noqon Waayo Anigoo Intaas Oo Xil Qaranka U Soo...
Somaliland: “Markaan Somalilander Noqon Waayo Anigoo Intaas Oo Xil Qaranka U Soo Qabtay Waa Kuma Ninka Ahi…?”
Wasiirkii hore ee arrimaha gudaha Somaliland Maxamed Carraale (Duur) oo xilligan ka tirsan Xisbiga Mucaaradka ah ee Waddani, ayaa beeniyey Warar sheegaya inuu tegay magaalada Muqdisho ee Caasimadda Soomaaliya, kaasoo Warbaahinta Afka Xukuumadda ku hadla qaarkood baahiyeen.
Maxamed Nuur Carraale (Duur) oo shalay Shir Jaraa’id ku qabtay magaalada Hargeysa, ayaa sheegay inaanay waxba ka jirin wararkaas ee ay yihiin kuwo been-abuur ah, isla markaana ay baahisay cid ujeeddooyin gaar ah lihi, waxaanu yidhi; “Waxaa maanta (shalay), Jaraa’idkan Sahan ku qoran; ‘Siyaasi Duur oo ka mid ah Musdambeedka Waddani oo Muqdisho ka degay’, wuxuu yidhi; ‘Wuxuu kulammo daahir yaa shamis ahi dhex-mareen Farmaajo’, bal AfSoomaaliga uu ku xeeldheeraanayo eega oo uu la yeeshay ama dhexmareen Farmaajo. Xisbiga Waddani ayaa Muqdisho u diray Siyaasi Duur oo dhiig baxbay ku tahay Qaranka, cidda dhiigbixinaysa idinkaa sheegi doona oo garta qaadi doona.”
“Waxaan is leeyahay malaa jawaab hadal uma baahana. Madasha aynu joogno, meesha aynu joogno iyo muuqeennan wada-jira ayaa marag ugu filan, in aan AfSoomaali ugu sharraxo oo aan idhaahdo waa beentii oo aan dhaleeceeyo uma baahanna baan is leeyahay. Waxay muujinaysa Warbaahinta ku hadasha magaca Xukuumadda, Warbaahinta ku hadasha Siyaasadda Kulmiye, Warbaahinta ku hadasha Afka Xukuumadda jiheeyuhu ka lumay ee Beenta ku soo celcelisa ayay muujinaysa raadka ay bulshadda kaga tagayso iyo Qaranka.” Sidaa ayuu yidhi Duur.
Waxa uu Duur oo sii watay hadalkiisa, intaas ku daray oo uu yidhi; “Waxaasi, waa siyaasad-xumo, waa hoggaamin-xumo, waa talo-xumo ayay Aniga arrintaasi iila muuqataa, waa beentii joogtada ahayd ee ku salaysnayd kala qobqobka, bulshadda 25-ka sano Qarankooda ka dhursugaysay in mar uun la aqoonsado. Maxaad filaysaan dhalin baad tihiin rejadda bulshadda sugaysa, marka maalin walba la yidhaahdo Nin wayn oo aad macno moodayseen oo Qaranka xilal ka soo qabtay xalay buu tegay, Soo maaha Bulshooy kala yaaca? Intii kalena way kala dareeraysa, marka waa kala dir loo geysanaayo Bulshadda reer Somaliland.”
“Markaan Anigu noqon waayo Somalilander Aniga oo intaas xil Qaranka u soo qabtay, waa kuma ka Somalilanderka ahi, waxaan ka soo qabtay xil adeeg oo waxaan ka soo shaqeeyay Wakaaladda Biyaha Berbera, oo waxa la ii doortay Xildhibaan Baarlamaan. Waxaan qabtay Masuulkii ugu sarreeyay ee Wasiir xil ku qaban lahaa oo ahaa Wasiirkii Amniga iyo Arrimaha gudaha Somaliland, xil iga maqan garan maayo, marka aan anigu saaka Xamar joogo Bulshadda la leeyahay jooga waa Bulshadee. Maahmaahbaa tidhaahda marka ehelbaydku durbaanka tumo carruurtuna way ciyaartaaba la yidhi, marka uu hoggaankii Kulmiye tumay music-dan ayaa dadka is leh u hiiliyanna waxay ku taageerayaan beenta uu keenno. Warbaahinay waxaad tihiin aalad warka umada u gudbisaa, waxaad tihiin waxa umadu tixraacdo oo gaadhsiiya runta.” Sidaa ayuu yidhi Duur.
Siyaasi Maxamed Nuur Caraale Duur
Somaliland: Xafladda Furitaanka Mashruuca Dib-U-Dhiska Waddada Isku Xidha Xamaas ilaa Hargeysa
Somaliland: Wasiirka Maaliyadda Somaliland Oo 1,200,000 Dollar Ku Wareejisay Komishanka Doorashooyinka
Somalia: Mudaharaad Lagu Diiddan Yahay Shilin Soomaaliga, Laguna Dalbanayo Shilinka Somaliland Oo Ka Dhacay Bariga Sanaag
Somaliland: Guddoomiyaha KULMIYE oo Noqday Murrashaxii u Horreeyey ee Cagaha Dhiga Magaalada Hadaaftimo ee Bariga Somaliland oo si Wayn Loogu soo Dhaweeyey
UK: Prince Charles iyo Gerry Adams oo is qacan-qaaday